विमान दुर्घटनामा निधन भएका न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा, जसलाई चितवनमा बिरामीले कुरिरहेका थिए – Hamrofm
Home / News / Local / विमान दुर्घटनामा निधन भएका न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा, जसलाई चितवनमा बिरामीले कुरिरहेका थिए
विमान दुर्घटनामा निधन भएका न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा, जसलाई चितवनमा बिरामीले कुरिरहेका थिए
Editor Hamrofm March 13, 2018	Local, National, News Leaveacomment 19 Views
चितवन, फागुन २९ – सोमबार सांँझ वरिष्ठ न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा आउंँछन् र शल्यक्रिया गर्छन् भन्ने पर्खाइमा एक बिरामी कुरिरहेका थिए । बिहीबार भरतपुरको एलाइभ अस्पतालमा भर्ना भएका पर्वतका ६५ वर्षीय पीताम्बर सापकोटा अकस्मात जहाज दुर्घटनामा थापाको निधन भएको थाहा पाएपछि छांँगाबाट खसेजस्तो भए । उनीमात्र होइन, अन्य धेरै बिरामी पनि उनको पर्खाइमा थिए । डा थापासँग टाउकाको शल्यक्रिया गरेर रोगको उपचार गर्ने सापकोटाको चाहना अहिले सपनामात्रै भएको छ । टाउकोमा रगत जमेका कारण उनको दायाँ हात चलेको छैन । डा थापाले टाउकाको दायाँ भागमा रगत जमेको र आफू फर्किएपछि शल्यक्रिया गर्ने जनाएकाले सापकोटा उक्त अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा थापाबाटै शल्यक्रियाको पर्खाइमा तीनजना बिरामी अहिले पनि शय्यामै छन् । अस्पतालको न्यूरो विभागमा आइतबार र बिहीबार शल्यक्रिया हुन्छ । अन्य दिनमा २० देखि ४० बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । भरतपुरको चितवन अस्पतालका बिरामी पनि उनको पर्खाइमा थिए । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा न्यूरो युनिटमा थापा प्रमुख थिए । उनीसँगै डा बेन्जु लक्ष्मी प्रधानले पनि शल्यक्रिया गर्थिन् । प्रधानले भनिन्, ‘मैले एक्लै शल्यक्रिया गरेकी छैन, उहाँ आएपछि शल्यक्रिया गर्न तीनजना बिरामी शय्यामै छन् ।’ उनका अनुसार ढाकामा भएको न्यूरो सर्जरीसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन डा. थापा गत मंगलबार चितवनबाट काठमाडौं गएका थिए । डा. बेन्जुले विगत ६ वर्षदेखि डा.थापासँगै काम गर्दै आएकी छन् ।
न्यूरो विभागमा उनीहरु दुईजना मात्र थिए तर आफूले एक्लै शल्यक्रिया नगरेकाले अब ती बिरामीलाई के गर्ने अहिल्यै भन्न नसक्ने प्रधानले बताइन् । टाउकामा ठूला ट्युमर देखिए दिनमा एउटा र सानो भए तीन वटासम्म शल्यक्रिया गर्ने गरेको प्रधानको भनाइ छ । क्यान्सर अस्पतालमा थापाले २०५८ सालबाट काम गर्दै आएका थिए । राजधानी बाहिर केही वर्षअघिसम्म न्यूरो सर्जन उनीमात्र थिए । त्यसैले जिल्लाका सरकारी र निजी अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी उनले मात्रै गर्दथे । चितवन अस्पताल प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष चूडामणि घिमिरेका अनुसार डा थापा शनिबार फर्कने भनेर आइतबार बिरामी बोलाइएको थियो । उनले भ्याएका बेला दैनिक २० बिरामी हेर्ने गरिन्थ्यो तर उनको फोन नलागेपछि बिरामी फर्किएको घिमिरेले बताए । डा थापाले पछिल्लो समय शल्यक्रिया निजी अस्पताल एलाइभमा पनि गर्दै आएका थिए । उक्त अस्पतालका प्रमुख डा प्रमोद लामिछानेका अनुसार विगत सात वर्षदेखि थापाले त्यहाँका बिरामीको पनि शल्यक्रिया गर्दै आएका थिए ।
डा लामिछानेले भने, ‘बिरामी आउँदा डा थापा मध्यरातमा पनि अस्पताल आएर शल्यक्रिया गर्नुहुन्थ्यो ।’ अर्थोपेडिक सर्जनसमेत रहेका लामिछानेले टाउकोको ट्युमर शल्यक्रियाका लागि डा. थापा देशकै एक नम्बर भएको दाबी गरे । थापाकै प्रयोगका लागि उक्त अस्पतालले रु ६० लाख खर्च गरेर उपकरण खरिद गरेको थियो । लामिछानेका अनुसार क्यान्सरको उपचारका लागि सरकारी अस्पताल आएका बिरामीलाई कहिल्यै पनि निजी अस्पतालमा ल्याउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने डा थापाले यहाँका मेडिकल कलेज र अन्य निजी अस्पतालमा गएर बिरामी हेर्ने र शल्यक्रिया गर्नेसमेत गर्थे । कुनै अस्पतालका बिरामीमा न्यूरोसम्बन्धी समस्या देखिएमा अन्य चिकित्सकले थापासँग राय सुझाव लिने गरेका थिए । थापाले काठमाडौंको अल्का अस्पतालमा पनि बिरामी हेर्ने र शल्यक्रिया गर्ने गर्दथे । देशको मध्यभागमा दुर्घटना बढी हुने हुँदा थापाको जिल्लामा माग र महत्व बढी थियो । विमान दुर्घटनामा देशले गुमाएको एक प्रतिभाशाली न्युरो सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट थापा कहिल्यै पनि दोस्रो नभएको उनका समकक्षीहरु बताउँछन् ।
काभ्रेको कुशादेवी–३ मा २०२४ माघ ४ मा जन्मिएका थापा विगत लामो समयदेखि चितवनमा बसोबास गर्दै आएका थिए । थापा सानैदेखि मेधावी विद्यार्थी भएको बताइन्छ । प्रवेशिका र प्रमाणपत्र तह पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका थापा २०५१ सालको एमबिबिएस ‘टपर’ बिद्यार्थी हुनुका साथै बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु शेखमुजिव विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको कोटाबाट एमएस परीक्षामा पास गर्ने पहिलो र आफ्नो ब्याचका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ पनि थिए ।
Previous खाजा खाने समयमा सचेतना जगाउँदै बालकुमारी कलेजका विद्यार्थीहरु
Next चितवनमा बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु